China Nordic Yemazuva Solid Wood Kugara Kamuri Maviri-Ruvara TV Mira Cabinet # 0020 Gadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Nordic Yemazuva Ano Solid Wood Wood Kamuri Yekugara-Mavara TV Mira Cabinet # 0020
Zita: TV Mira
Muenzaniso nhamba: Amac-0020
Kukura: 1800 * 350 * 430mm
Inokodzera nzvimbo: Kamuri yekutandarira, Hotera, Kudzidza
Danda rakaoma maviri-mavara mana-dhirowa TV kabati
Zita: Tafura yepadivi
Rakareruka uye remazuva ano rakasimba huni TV kabati
Pakutanga kuona, iyi chena lacquered TV kabhodhi iri nyore uye yakashongedzwa. Iyo yakachena lacquered pamusoro inoenderana neina mana akaoma huni kutenderera-ziso rinobata, ayo ari nyore kudhonza uye haazokonzere netsaona mapundu. Peya yezvisikwa zvekupenda uye macaligraphy pakombuta, hari yemiti yakasvibira yakasvibira, inowedzera hunyanzvi uye kugona kune iyo TV kabati.
Bold uye yakakomberedzwa yakasimba huni makabati makumbo
Zvinoenderana nesainzi dhizaini yeTV kabati, makobvu emota yemakenduru, makona anonzwisisika, uye makumbo ehabhineti akakomberedzwa pasi anoita kuti simba rekutakura riwedzere, riwedzere kusimba uye kugadzikana, kudzikamisa nzvimbo yepasirese nepasi, kudzikisira kupokana kwekukonana, uye kugadzira zviri nyore kwauri kuti ufambe, pusha uye dhonza Mirira. Deredza kuramba, kudzivirira ruzha, uye kuwedzera hupenyu hwayo hwebasa.
Bhatani dhirowa mubato dhizaini
Iyo yakapfava uye yakapusa bhatani mubato dhizaini yakagadzirwa neyakaomeswa huni, iyo yakasimba uye yakasimba. Svikira mukati uye zvinyoronyoro dhonza dhirowa kunze, chengetedza nguva nesimba Iyo bhatani bhatani mubato inowirirana neyakareruka uye yakachena chena lacquer, inoratidza imwe mhando yerunako. Gutsikana nekutsvaga kwako kwepamusoro fashoni yemidziyo.
Solid kumashure dhizaini
Iyo yakasimba kumashure muviri dhizaini inogona kunyatso kudzora njodzi yezvinhu mudhirowa isingatsvete mukati mayo, nokudaro zvichikonzera njodzi yekudonha. Iyo yakavharwa kumashure yakapusa uye yakasikwa, yakati sandara uye yakatsetseka, uye inogona kusungirirwa kwazvo kumadziro kudzivirira zvinhu kubva kudonha.
Yakakwirira yekuchengetedza mwero nzvimbo dhizaini
Madhirowa mana akakura ane chinzvimbo chepamusoro, akapatsanurwa zvakaringana, anogona kukubatsira kuti uchengetedze zvine musoro zvinhu zvemhando dzakasiyana. Dhizaini yehuni dzakasimba inotsvedza njanji inowedzera kutsvedza kutsvedza pakati pemadhirowa, uye haina kuburitsa ruzha semasiraidhi esimbi uye iri nyore kuita ngura. Iyo yakasimba huni inotsvedza njanji inoderedza kukanganisika kukuvadzwa kwehuni uye inogona kuwedzera hupenyu hwebasa rebato reTV.
Yakakwira mhando chena oak TV kabati
Yakagadzirwa nechena oak inotengwa kubva kuNorth America, huni hwakasimba hwakasimba hauna kuumbika, kana huni hwakachipa hwerabha. Hunhu hwehuni hwapfuura hwakasimba kuongororwa kwehunhu, saka unogona kuva nechokwadi. Tsanga yehuni yakajeka uye yakasikwa, tsanga yehuni yakatsetseka yakarongedzwa neimwe nzira, yakanaka uye yakapusa, iko kusimba kwakasimba uye kunogara, uye ruoko rwunonzwa rwakanaka uye rwakatsetseka. Iyo yakanaka huni yekugadzira yemhando yepamusoro fenicha.
Pashure: 2020 nyowani yakamira SUP surfboard yekuzorora mvura mitambo yemitambo 0364
Zvadaro: Nordic minimalist chena oak solid huni diki furati TV Mira cabinet # 0021
Nyowani Solid Pine Mubhedha Wepamba yekurara Furniture 0223
Nordic mwenje mwenje PU yekudyira chigaro kutaurirana ...
Nordic manyorerwo flannel cheya yemhando yepamusoro minimalist f ...
Amazon Nyowani Tsuro Inobereka Imba Yekuchengetedza Pet Ca ...
Nordic solid huni yekudyira tafura mukaka tii shopu ...